I-Android O iya kuziswa ngokusesikweni ngo-Agasti 21 | Iindaba zeGajethi
Kwi-Agasti elandelayo ye-21 iziganeko ziyafumba. Kwelinye icala siya kuba nayo ukusithwa kwelanga lilonke Okulindelweyo iminyaka. Kwelinye icala, uGoogle ubhengeze ukuba uza kuzisa ngokusemthethweni Inguqulelo yamva nje ye-Android: Android O. Zininzi iingqikelelo malunga neqonga elitsha leselula kunye amacwecwe ye-android eluhlaza. Kwaye enye yezona zinto zivakalayo ligama elilandelayo lenguqulelo.
Onke amanani abizwa ngegama 'uOreo' "Ngokuchanekileyo, njengeekuki." Ngaphezulu, ngokokungena kwesango Police PoliceNgexesha lokwazisa kukaGoogle kwezonxibelelwano, ngokucacileyo igama lefayile yevidiyo eqhotyoshelweyo ikwanalo eli gama; kamva yatshintshwa yenziwa 'iOctopus'. Oku kubhekisa kwinani leethente kunye nenombolo yenguqulo ye-Android, i-Android 8.0.
Kwakhona, abafana kuGoogle kufuneka basebenze. Kwaye basungule i-portal apho zombini inguqulelo entsha ye-Android O kunye ne-Eclipse iyonke ibhengeziwe. Ingxilimbela ye-intanethi yenza izingqinisiso ezininzi kwisiganeko seplanethi. Ngaphezu koko, kubandakanya uMncedisi kaGoogle ebonisa ukuba umsebenzisi angabuza umncedisi onyanisekileyo malunga nantoni na malunga nomsitho, kunye nokuyixela ukuba icwangcise izilumkiso ngeeyure ezithile kwaye ungaphoswa naliphi na kula maxesha mabini omhla.
Kwelinye icala, kwi ela phepha linye lisibizela ezi ziganeko zibini. Ngaphezu koko, ukufikelela kwiindlela zabo kuvunyelwe umchachazo. Ukubalwa kwakhona kubonelelwe ukuze wazi ngokuthe ngqo ukuba usasazo luza kuqala nini. EUnited States, kuya kubakho ngeye-14: 40 emva kwemini. Ke eSpain uya kukwazi ukuyibona malunga ne-20: 40 emva kwemini-uye uyokulungiselela iipapa.
Okokugqibela, ukuba ungumntu othanda inzululwazi ngeenkwenkwezi, uGoogle ushiya umkhondo wokuthatha inxaxheba okanye ube ngumbukeli.I-Eclipse Megamovie 2017'apho iifoto ze-amateur kunye ne-astronomer ziya kunikwa. Ke, ukushiya i-Eclipse ecaleni, Yintoni ukubheja kwakho kwegama le-Android O okanye i-Android 8.0?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Android O iya kuziswa ngokusesikweni ngo-Agasti 21
Ingcwaba leMveliso, lo ngamangcwaba emveliso ekhunjulwayo
UXiaomi Mijia M365, isithuthuthu esiguqukayo sombane nge- € 319 kuphela